ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Take stock of, Fits the bill နဲ့To be at wits end တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
Take (ယူတာ)၊ stock (လက်ကျန်ကုန်ပစ္စည်း)၊ of (တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်ကျန်ပစ္စည်းစာရင်း ကောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို အကဲခတ်သုံးသပ်ပြီး၊ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားတာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ တနှစ်ကုန်သွားလို့ ဒီဇင်ဘာလရောက်ရင် လူတဦးအနေနဲ့ ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆိုးအကောင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာမှာ Take stock of လို့ ရည်ညွှန်းပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un နဲ့ မေလမှာ တွေ့ဆုံဖို့ မမျှော်လင့်ဘဲ သဘောတူခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနေ လူသိရှင်ကြား၊ ချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေတယ်လို့ သူယူဆတဲ့အကြောင်း အမေရိကန်ရုပ်သံ CBS နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက် The Nation သတင်းစာကြီးက North Korea's Kim 'taking stock' of Trump meet ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
John advised his friend to take stock of his finances before his retirement.
John က သူ့သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ အလုပ်က ပင်စင်မယူခင်၊ ကိုယ့်စီးပွားရေးအခြေအနေကို သေသေချာချာ လေ့လာသုံးသပ်ဖို့ အကြံပေးခဲ့တယ်။
(2) Fits the bill
Fits (တော်တာ)၊ the bill က အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ရှိပေမယ့် ဒီနေရာမှာရှေးတုန်းက ဖျော်ဖြေပွဲတွေအတွက် ကြော်ငြာစာတမ်းကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Billboard လို့ခေါ်တဲ့ ဒီကြော်ငြာစာတမ်းမှာအဓိကဇာတ်ဆောင်တွေရဲ့  ရုပ်ပုံတွေကို ပရိသတ်ဆွဲဆောင်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြော်ငြာနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလူက ဘယ်လိုလူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က ကြော်ငြာနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က အလုပ်တခုခုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီတာ၊ အံကိုက်ဖြစ်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာဘန်းစကားမှာ လိုတာနဲ့ကွက်တိဖြစ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Fits အစား Fills ဆိုပြီးတော့ Fills the bill လို့ ပြောင်းပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Trump က သူ့ရဲ့  လုံခြုံရေးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် မကြာသေးမီက ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် H.R. McMaster နေရာမှာ အရင် ကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ John Bolton ကို အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်ရာမှာ John Bolton မှာ Trump လိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပိုပြီးရှိတယ်၊ Bolton ဟာ Trump လိုပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီး၊ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ Mr. Bolton fits the bill လို့ ရေးသားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
John is likely to be selected by the Director as he fits the bill for the job.
John က အလုပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပြည့်မီတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါရိုက်တာက သူ့ကို ရွေးချယ်ဖို့များတယ်။
(3) To be at wits end
To be at (နေရာတနေရာမှာ ရှိနေတာ)၊ wits (အသိဥာဏ်)၊ end (အဆုံး) ဖြစ်ပြီး စကားတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အသိဥာဏ် အဆုံးနေရာမှာ ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က စိတ်ကုန်စိတ်ပျက်တာ၊ ကျမတို့ မြန်မာဘန်းစကားမှာ ဦးနှောက်ခြောက်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေက ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်လှတဲ့အတွက် ဘာလုပ်လို့၊ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေမျိုး၊ တနည်းတော့ ခေါင်းစားတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Trump နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့စိတ်က အခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုး ပြောင်းတတ်သလို၊ Twitter ပေါ်မှာလည်း သူ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို ကောက်ရေးတာကြောင့် အိမ်ဖြူတော်အမှုထမ်းတွေက ဦးနှောက်ခြောက်နေတယ်ဆိုပြီး၊ Trump aides are 'at their wits' end' လို့ The Politico သတင်းစာကြီးကခေါင်းကြီးမှာ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The board members were at their wits end trying to solve the company’s financial problems.
ကုမ္ပဏီရဲ့  စီးပွားရေးပြသနာတွေကို ကြိုးစားဖြေရှင်းရာမှာ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေ ဦးနှောက်ခြောက်ကုန်ကြတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Take stock of, Fits the bill နဲ့To be at wits end တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။